Foto ikpeazụ nke Bob Marley tupu ọnwụ ya: nke a bụ foto ikpeazụ amaara amaara site na akụkọ banyere reggae Bob Marley tupu ọ nwụọ n'ọrịa cancer na May 11, 1981 ... (VIDIO)
Site na: KongoLisolona: Disemba 30, 2019 03: 30 Enweghị asịsa
Bob Marley, le « Pape du reggae » aux plus de 200 millions d’albums vendus dans le monde, est mort le 11 mai 1981 à Miami : ọ chọrọ ịnwụ n'ụlọ na Jamaica, mana ọ nweghị ike iru ụlọ ya.
Ọ nwụrụ na osisi cedar of Lebanon Ụlọ ọgwụ dị na Miami (taa University of Miami Hospital) mgbe ọ dị afọ 36, mgbasa nke melanoma n'ime akpa ume ya na ụbụrụ mere ka ọ nwụọ. Okwu ikpeazụ ya nye nwa ya nwoke Ziggy bụ: « L’argent ne peut acheter la vie. »
Na Mach 8, 1975, Bob Marley na Jackson 5 na-ekerịta ogbo ahụ na Jamaica: na Mach 8, 1975 mere otu n'ime egwuregwu ndị a ma ama n'akụkọ egwu.
A obere biography nke Robert Nesta Marley a maara dị ka Bob Marley ... (Na)
Ọkt24 01: 28